Kuvaka Crane, Crane Machine, Crane Service, Injini Crane - XJCM
XJCM inyanzvi yepamusorosoro bhizinesi yenyika inyanzvi dhizaini, inogadzira uye inobata neyakaomarara nzvimbo yenzvimbo, rori kireni, shongwe kireni uye mimwe michina yekuvaka.
Kuzvimisa pachako shongwe kondo
Nzvimbo yakaipa yenzvimbo
Kuwedzera kune epamusoro mashandiro ezvigadzirwa, XJCM inopa yakavimbika sevhisi sevhisi. Izvi zvinoreva kuti tinokutendera kuti ushande zvakachengeteka uye nemazvo - kunyangwe mumamiriro akaipisisa.
nhare yeshongwe kondo
XJCM muchiso 12 tani diki knuckle boom rori Crane
XJCM 80 ton toni kara kutengeswa
24 tani pombi yakaturikidzana
XJCM muchiso Kusimudza waya crane
XJCM brand 25 ton rori ine crane iri kutengeswa
30 Ton Kusimudza muchina wakaomarara kwenzvimbo crane
XJCM brand Yega Kuzvidzora nekudzikisa Sanitatio ...
Yakasimbiswa muna 2002, Xuzhou Jiufa Construction Machinery Co., Ltd (XJCM). ibasa rekugovana pamwe nemari yekudyara yeRMB16 mamirioni. Kambani yedu inovhara nzvimbo yemakumi mashanu ezviuru zvemamirimita, makumi matatu neshanu ari emashopu. Isu takashongedzerwa nezvinopfuura 260 zvigadzirwa-zvitsva uye zvemberi zvivakwa. Isu tinoshanda mukugadzira zvivakwa zvakakura zvemuchina wekuvaka uye yedu yegore yekugona kugona ndeye zviuru makumi maviri metric matani. Yepamusoro-tekinoroji michina yekuverenga manhamba, kuwelda, kugadzira uye kupisa kurapwa zvinoshandiswa mukuita kwekugadzira kwedu. XJCM main zvigadzirwa zvakashata terrain crane, rori crane, kuzvipira -kucheresa shongwe kondo, multifunctional pipelayer uye akawanda ekuvaka michina zvikamu. Ivo zvechokwadi eyakajairika mhando. Yedu RT akateedzana cranes, QY akateedzana marori crane uye JFYT akateedzana shongwe makira anotumirwa kuNorth America. South America, Africa, Middle East, West Asia, Southeast Asia uye nedzimwe nyika dzinopfuura makumi matatu nematunhu.
Iyo "RT yakateedzera-nzira crane" yakazvimiririra yakatsvakurudzwa uye kuvandudzwa nekambani yakazivikanwa se "chigadzirwa chepamusoro-soro" neSainzi neTekinoroji Dhipatimendi rePurovhinzi yeJiangsu uye yakanyorwa mu "National Torch Plan Industrialization Demonstration Project" nebazi. yeSainzi neTekinoroji.
XJCM inogadzira mukugadzira zvivakwa zvihombe zvemashini ekuvaka.Tinopa mabhakiti ekuchera, migomo yekudhirowa, mawoko edombo, mabhooms, mafuremu epamberi, mafuremu epamberi, mapini roll uye zvimwe zvigadzirwa zvine hukama kune XCMG, CAT, FOTON, LIUGONG, HELI forklift, YUTONG uye yakawanda mamwe makambani emakambani anozivikanwa muChina.
XJCM brand boom ye cranes
Loader kumashure furemu
XJCM inopa Crane boom
XJCM gadzirisa Yese Model Model Wheel Loader Bhaketi
Chinese Mugadziri Kutengesa 2ton Kuti 100ton Excava ...